पति बाहिर भएको बेला ग’र्भवती भएकि श्रीमतिले दिइन् दुनियाँ चकित हुने यस्तो जवाफ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पति बाहिर भएको बेला ग’र्भवती भएकि श्रीमतिले दिइन् दुनियाँ चकित हुने यस्तो जवाफ!
एजेन्सी । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो । ऊसँग डेढ वर्षकी छोरी पनि छ
तबसम्म सबै कुरा ठीक थियो । महिलाको नन्दका अनुसार उनकी भाउजु तीन महिनादेखि गर्भवती भइन् ।जबकि उनको दाई लामो समय देखि सँगै छैन । दाई सात महिना देखि कोलकातामा छन् । सात महिना देखि भेटघाट नभएपछि भाउजुको पेटमा बच्चा कसरी आयो भन्दै प्रहरीमा उनले खबर गरिन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
त्यहाँकी महिलाले भनिन् कि बच्चा उसको पतिको हो । उनका पति सपनाहरुमा आउँथे। र यही कारणले गर्दा उनी गर्भवती भइन् ।पञ्चायतको समयमा महिलाको फोन पनि जाँचिएको थियो । उनको फोनमा केटाको नम्बर फेला पर्यो । त्यसपछि पोल खोलियो कि यो बच्चा त्यो केटोको हो, र यी महिला उसँग सम्बन्धमा छन् । सांकेतिक तस्बिर । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
आजदेखि दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ हुने, प्राधिकरणले एक्कासी निकाल्यो यस्तो सूचना (विज्ञप्तीसहित)
नि,र्दयी घरबेटी : पानीको नि,हुँमा निभेको ज्यो,ति ,प,रिवारको बि,चल्ली